The Last Ship (2018) Season5Complete – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
5 Seasons 10 Episodes
Synopsis of The Last Ship (2018) Season5Complete
The Last Ship ရဲ့ Final Season ကို ရောကျရှိလို့လာပါပွီ။ ဒီ Season ၅ မှာတော့ နိုငျငံရေးတှေ War တှကေို အဓိကရိုကျကူးထားတာဖွဈပါတယျ။ Virus ကငျးစငျသှားပမေဲ့ စဈပှဲတှဆေငျနှဲဖို့ ဖွဈလာတဲ့ အခါ ဘယျလိုတှရေငျဆိုငျကမြလဲ ? နသေနျဂြိမျးသင်ျဘောကွီးကတော့ ဒီတဈခါတိုကျခိုကျခံလိုကျရပီး အရငျလိုလူတှအေကုနျရှငျသနျနိုငျပါ့မလား ? အမရေိကနျအနနေဲ့ အရှအေ့လယျပိုငျးကနိုငျငံတှနေဲ့ ရငျဆိုငျပီး အကောငျးဆုံးရလဒျတှကေိုရယူသှားနိုငျမလား ? ကပ်ပတိနျတှနျခနျြဒလာကတော့ ဘယျလိုတှပွေနျလညျပါဝငျလာမလဲဆိုတာအကောငျးဆုံးကွညျ့ရမဲ့ ဇာတျလမျးတှဲဖွဈပါတယျ။ အပိုငျး (၁၀) ပါဝငျလို့ ဘာသာပွနျပီးတာနဲ့ရသလောကျတငျဆကျပေးသှားပါမယျ
ဒီဇာတျလမျးတှဲကို ဘာသာပွနျပေးသူကတော့ Pyae Sone Ynwa & Lucas Wang ဖွဈပါတယျ
The Last Ship ရဲ့ Final Season ကို ရောက်ရှိလို့လာပါပြီ။ ဒီ Season ၅ မှာတော့ နိုင်ငံရေးတွေ War တွေကို အဓိကရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Virus ကင်းစင်သွားပေမဲ့ စစ်ပွဲတွေဆင်နွဲဖို့ ဖြစ်လာတဲ့ အခါ ဘယ်လိုတွေရင်ဆိုင်ကျမလဲ ? နေသန်ဂျိမ်းသင်္ဘောကြီးကတော့ ဒီတစ်ခါတိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရပီး အရင်လိုလူတွေအကုန်ရှင်သန်နိုင်ပါ့မလား ? အမေရိကန်အနေနဲ့ အရှေ့အလယ်ပိုင်းကနိုင်ငံတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ပီး အကောင်းဆုံးရလဒ်တွေကိုရယူသွားနိုင်မလား ? ကပ္ပတိန်တွန်ချန်ဒလာကတော့ ဘယ်လိုတွေပြန်လည်ပါဝင်လာမလဲဆိုတာအကောင်းဆုံးကြည့်ရမဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲဖြစ်ပါတယ်။ အပိုင်း (၁၀) ပါဝင်လို့ ဘာသာပြန်ပီးတာနဲ့ရသလောက်တင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်
ဒီဇာတ်လမ်းတွဲကို ဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ Pyae Sone Ynwa & Lucas Wang ဖြစ်ပါတယ်
Quality -Blu-ray 1080p
YuuDrive , Direct Download , SharePw , Storage M-Sub
Episode runtime10 min
Home PageThe Last Ship (2018) Season5Complete